Chiwoniso - JPop.com
Zimbabwe's Chiwoniso performs entrancing and uplifting songs with ancient soul and modern spirit. Backed by the mesmerizing interlocking melodies of the mbira and the deep grooves of an all-star lineup featuring some of Zimbabwe and South Africa's top musicians, Chiwoniso's voice resounds with defiant strength and profound tenderness. See http://www.cumbancha.com/chiwoniso for more information on Chiwoniso. With a sound that recalls the fire of Angelique Kidjo Read more on Last.fm
Zimbabwe's Chiwoniso performs entrancing and uplifting songs with ancient soul and modern spirit. Backed by the mesmerizing interlocking melodies of the mbira and the deep grooves of an all-star lineup featuring some of Zimbabwe and South Africa's top musicians, Chiwoniso's voice resounds with defiant strength and profound tenderness. See http://www.cumbancha.com/chiwoniso for more information on Chiwoniso. With a sound that recalls the fire of Angelique Kidjo, the inspiration of Oliver Mtukudzi, the rebellion of Thomas Mapfumo and the soul of India.Aire, Chiwoniso is one of the most exciting talents in African music today. Chiwoniso Maraire is a Zimbabwean musician who while pursuing her solo career has also recorded with Andy Brown and The Storm, Women's Voice, and The Collaboration. While traditional Zimbabwean music provides a foundation for her music, she incorporates many influences. Read more on Last.fm.